Aragtida farsamada saxanka | Saadaasha Shabakadda
Kadib markii hore loogu arkay qodobada Alfred Wegener iyo Aragtida qulqulka qaaradda, sayniska ayaa horumarey illaa, 1968, kan hadda jira plate tectonics theory. Aragtidani waxay sheegaysaa in balaayiin sano, taarikada ay qolofta qaaradda ka kooban tahay ay ku socdeen dhaqdhaqaaq gaabis ah laakiin joogto ah.
Hadaad rabto inaad si qoto dheer u ogaato tectonics plate, waxaan kugula talinayaa inaad sii wado aqrinta qoraalkan 🙂
2 Dhaqdhaqaaqa saxanka
3 Aasaaska aragtida
4 Noocyada dhaqdhaqaaqa saxanka tectonic
Kahor intaan saxanka cilmiga la aqbalin bulshada sayniska, saynisyahan Alfred Wegener ayaa soo jeediyey aragtida ku saabsan leexashada qaaradda. Waxay ku salaysnayd socodka socodka ee qaaradaha. Wuxuu uruuriyay macluumaad badan oo sharraxay in badan oo shaki ah oo ku saabsan qaabka qaaradaha iyo qaybinta noocyada xoolaha iyo dhirta.
Waxaa la soo uruuriyay cadeymo Paleoclimatic ah oo muujinaya nooca cimilada ee ka jirtay qaaradda weyn ee loo yaqaan Pangea. Haraagii xayawaan ee ka jiray labada qaarad iyo mid kale ayaa sidoo kale la helay waana sababta oo ah ka hor inta aysan dhulalkaasi sameysmin hal dusha.
Magnetism-ka dhulka ayaa sidoo kale ahmiyad weyn u leh dareenka jihaynta dhagaxyada iyo macdanta. Aragtidan ayaa la aqbalay sannado ka dib dhimashadii Wegener. Si kastaba ha noqotee, sababta qaaradaha u guureen lama sharixin. Taasi waa, maxaa sabab u ahaa in qaaradduhu u wada dhaqaaqaan dhammaan qolofta qaaradda. Jawaabta waxaa bixiya saxanka tectonics.
Dhaqdhaqaaqa waxaa sabab u ah sameynta joogtada ah ee walxaha cusub ee gogosha. Qalabkan waxaa lagu abuuray qolofta badweynta. Sidan oo kale, maaddada cusubi waxay ku shaqeysaa xoog tii hore oo waxay keentaa in qaaradaha ay isbedelaan.
Sidii aan soo sheegnay, aragtidan ayaa dhammaystireysa oo si buuxda u sharraxeysa qulqulka qaaradda. Waana inay ahayd oo keliya inay lagama maarmaan ahayd in la ogaado mishiinka mishiinka dhaqaajiya taarikada qaaradda.
Qaaradaha ayaa la isku daray ama la kala gooyay, badaha ayaa kala furmay, buuraha kor u kacayaan, cimilada ayaa isbedeleysa, Saameyn ku leh waxaas oo dhan, qaab aad muhiim ugu ah isbadalka iyo horumarka noolaha. Qolof cusub ayaa si isdaba joog ah looga abuurayaa badda hoosteeda. Jilif Tani waxay leedahay heerka koritaanka aad u gaabis ah. Marka gaabis ah oo kaliya inuu koro kiiloomitir ama laba sano sanadkii. Si kastaba ha noqotee, kobcitaankan isdaba-joogga ah wuxuu keenaa qolofta aagga godadka badda in la baabi'iyo iyo isku dhacyada u dhexeeya qaaradaha si ay u sameysmaan.
Dhamaan ficiladan waxay wax ka beddelaan gargaarka dhulka. Waad ku mahadsantahay isku dhacyadan iyo dhaqdhaqaaqyada taarikada bad iyo bado badan ayaa la abuuray iyo buuro waaweyn oo u kala safan sida Himalayas.
Marka loo eego aragtida plate tectonics, qolofka dhulka wuxuu ka kooban yahay taargyo fara badan oo si isdaba joog ah u socda. Baloogyadan waxaa taageera lakab dhagax adag oo dabacsan. Xusuusashada lakabyada dhulka waxaan arki karnaa in gogosha sare ay jiraan qulqulka qulqulka isbeddelka cufnaanta walxaha.
Markay arkeen in cufnaanta qalabka ay kala duwan yihiin, dhagaxyada waxay bilaabaan inay ka wareegaan kuwa ugu cufan uguna yar cufnaanta. Sida jawiga jawiga cimilada, marka cufnaanta hawadu cufan tahay, waxay u dhaqaaqi doontaa aaggaas oo ka cufan yar. Dhaqdhaqaaqa had iyo jeer waa isku mid.
Hagaag, dhaqdhaqaaqa joogtada ah ee qulqulka qulqulka qulqulka marada ayaa ah kuwa, maaddaama lakabyada alaabada ay ku xardhan tahay taarikada ay yihiin kuwo dabacsan, taas oo ka dhigaysa inay ku jiraan dhaqdhaqaaq joogto ah.
Juquraafiga wali si dhab ah uma go'aamin sida ay labadan lakab u fal-galaanLaakiin aragtiyaha ugu caansan ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqa walxaha qafiifka ah ee la shubay ee asthenosphere ay ku qasbeyso taarikada sare inay dhaqaajiso, hoos u degto ama kacdo.
Si si fiican loo fahmo, kuleylku wuxuu u eg yahay inuu kordho. Dhaqdhaqaaqa meeraha, kuleylku wuu ka cufan yahay qabowga, sidaa darteed had iyo jeer waxay u egtahay inuu kaco oo lagu beddelo waxyaabo cufan. Sidaa darteed, inta udhaxeysa wadarta qulqulka qulqulka marada iyo cadaadiska ay keeneen dhalashada qolof badeed cusub, taarikada waxay ku jiraan dhaqdhaqaaq joogto ah.
Mabda 'isku mid ah ayaa lagu dabaqayaa dhagaxyada kulul ee ka hooseeya dusha sare ee dhulka: alaab go 'dhalaal ah ayaa kor u kacdahalka dhaxanta iyo qallafsanaanta arrintu hoos ugu sii sii dhacayso.
Noocyada dhaqdhaqaaqa saxanka tectonic
Dhaqdhaqaaqa taarikada tektikada waa mid aad u gaabis ah sidaan horay u soo sheegnay. Wuxuu awoodaa oo kaliya inuu dhaqaaqo xawaare dhan qiyaastii 2,5 km sanadkiiba. Xawaarahaani wuxuu xoogaa la mid yahay xawaaraha ay cidiyaha ku koraan.
Dhaqdhaqaaqa taarikada oo dhan isku jiho ma ahan, sidaa darteed, waxaa jira shilal badan oo midba midka kale ka kale oo u horseeda dhulgariir dusha sare ah. Haddii shoogyadan ay ka dhacaan badda, tsunami ayaa dhacda. Tani waxay sabab u tahay isku dhaca laba taarikada badda.
Dhacdooyinkaas oo dhami waxay ku dhacaan xoog badan cidhifyada taarikada. Dhaqdhaqaaqani badanaa lama saadaalin karo, markaa suurtagal maahan in horey loo sii ogaado jiritaanka dhulgariir.
Noocyada dhaqdhaqaaqa jira waa:
Dhaqdhaqaaqa Kaladuwan: Waa marka laba taarikada ay kala baxaan oo ay soo saaraan waxa loo yaqaan cillad (god dhulka ku yaal) ama buuro biyo ah.
Dhaqdhaqaaqa Kaladuwan: Waa marka ay laba taariko isu yimaadaan, saxanka khafiifka ahi ka sii liito midka ka sii dhumuc weyn. Tani waxay soo saartaa safafka buuraha.
Dhaqdhaqaaqa isdabajoogga ama Waxqabadka: Labada taarikada ayaa ku siibanaysa ama ku jiifa jihooyin iska soo horjeedda. Waxay sidoo kale keenaan guuldarrooyin.
Markii waxaas oo dhan la ogaado, saynisyahannadu waxay qiyaasi karaan dhacdooyinka dhulgariirrada qaarkood ama waxay saadaalin karaan dhaqdhaqaaqa qaaradaha kumanaan sano ka dib. Waana in dhaqdhaqaaqa hadda jira ee qaaradaha uu yahay in midba midka kale ka fogaado. Si kastaba ha noqotee, Marinka Gibraltar gebi ahaanba wuu ahaan doonaa ku xirmay 150 milyan oo sano Badda Mediterranean-kana waa la waayi doonaa.
Waxaan rajaynayaa inaad ka heshay aragtida saxanka tectonics oo aad wax badan ka baratay dhulkeenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Aragtida tectonics plate